Ukunyuka kweNtengiso-yeNtengiso yeNtengiso | Martech Zone
Uyakundifumana rhoqo kwiingxoxo ezinkulu kwi-intanethi ngayo nantoni na enxulumene nezopolitiko, inkolo kunye nobungxowankulu… onke amaqhosha ashushu abanjwa ngabantu abaninzi. Kungenxa yoko le nto ndinendawo yokuhlala kunye neyophawu lwamajelo eendaba ezentlalo. Ukuba ufuna ukuthengisa kuphela, landela uphawu. Ukuba uyandifuna, ndilandele… kodwa ulumke… uyandifumana.
Ngelixa ndingongxowa-nkulu ongagungqiyo, ndinentliziyo entle. Ndiyakholelwa ukuba kufuneka sincedane kwaye singaxhomekeki kumagosa angasebenziyo kwaye angasebenzi. Ndiyakholelwa ngokwenyani indlela esizitshintsha ngayo izinto kukuba sithathe uxanduva kwaye sincedise ekubeni zezona zinto zibangela utshintsho. Eyethu Nkonzo uhlala unikela ngexesha, imali kunye nezinye izixhobo ukuze unganeli nje ukunceda imibutho yesisa… kodwa nokunceda amashishini angenazo izibonelelo kodwa athembisayo.
Akusekho kulungile ngokwaneleyo ukuba ube ne kubakho beendaba. Ukuthengisa i-3.0 kuya kuphumelela ngabo baba ziimpawu zentlalo eziqhutywa ziinjongo, kwaye ukwenza njalo, i-CMO, i-CSO, i-CSR, kunye nezikhokelo zeSiseko kufuneka zilungelelanise ukuzisa ibali lebhanti ehambelanayo ebomini. Phuma Okokuqala infographic Apha ngezantsi kukho iinyani ezinzima ezibandayo ezenza kucace ukuba ikamva lenzuzo liyinjongo, kwaye ezona zimpawu zibalaseleyo zekamva ziya kuba zezona ziqhuba olona tshintsho lunentsingiselo kwezentlalo. USimon Mainwaring
Ayisiyonto ilungileyo nje ukuba uyenze, ukuqhutywa yinjongo ikwangulindelo lwamashishini, the Inkuthazo kubasebenzi kunye nomkhwa wokuthenga okhulayo ngabathengi. Abantu bafuna imali yabo iye kumashishini anolwazi ngokusingqongileyo, abaphathe kakuhle abasebenzi babo, kwaye batyale ixesha kunye namandla ekwenzeni ilizwe libe yindawo engcono.
Ndiyavuya Intengiso eqhutywa yinjongo Isicwangciso esandayo kunye nesihloko sencoko-ndibhale ngaphambili malunga nokukhathazeka endinako xa abantu begxeka unobangela wentengiso (sixoxe ngale nto kunye Umceli mngeni we-ALS Ice Bucket… Ugh). Ndingayikhuthaza yonke inkampani ukuba ikhuthaze iinzame abazenzayo zokunceda abo babangqongileyo- la manqaku abonisa ukuba kutheni!
tags: unobangelaunobangela wentengisoInjongoIntengiso eqhutywa ziinjongoIntengiso yentlalo eqhutywa ziinjongoIqhutywa yinjongoUSimon MainwaringIimpawu zentlalothina kuqala
Sep 5, 2014 ngo-1:11 PM
Umhle kakhulu, Douglas. Ngokuqinisekileyo oku kwenzeka ngokukhawuleza okukhulu kwaye sonke kufuneka sikulungele ukuyamkela. Enkosi!
Sep 6, 2014 kwi-1: 21 AM
Loo nto ayindibeki ekumangaliseni kunokuba bubuso bokwenyani kwezoqoqosho kwaye ewe uyinike yonke into !!!
Nov 28, 2014 ngo-12:20 AM
Iposti enkulu kaDouglas. Amanani onike wona kweli nqaku anolwazi kakhulu. Ndifumene inqaku elifanayo elithetha malunga nendlela ukuthengisa okuqhutywa yiNjongo kungaphezulu nje kwegama lentengiso yedijithali. http://bit.ly/1yj272u